ဘာကြောင့်လဲလူတွေ BLACK သောကွာနေ့ကျင်းပ? | BLACK သောကွာနေ့ 2017 လာမယျ့အ 24 Nov
ဘာကြောင့်လဲလူတွေ BLACK သောကွာနေ့ကျင်းပ? Black ကသောကြာနေ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေါင်းစပ်များအတွက်စျေးဝယ်နေ့. လူတိုင်းစျေးဝယ်သွား. ခရစ္စမတ်မတိုင်မီပြီးခဲ့သည့်အဓိကအားလပ်ရက်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးနေ့ကအဖြစ်, ကခရစ်စမတ်စျေးဝယ်ရာသီ၏တရားမဝင်အစအဦးစေသည်. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်ယူရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပုံမှန်ကတည်းကယခုနှစ်အလုပ်အများဆုံးစျေးဝယ်သောနေ့ရက်ဖြစ်ခဲ့သည် 2005. တွင် 2014, Black ကသောကြာနေ့တွင်အသုံးစရိတ်ပမာဏကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျဆင်း 2008 ဆုတ်ခြင်း. $50.9 ဘီလျံခန့်အရှုံးကာလအတွင်းသုံးစွဲခဲ့သည် ဆက်ဖတ်ရန် [...]
စက်တင်ဘာလ၌ Milan Fashion Week ဇယား 2017
mujeer စက်တင်ဘာလ 20, 20170မှတ်ချက်များ
ရှိုးများ၏မီလန်ဇယား. မီလန်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်လာမည့်ရက်စွဲများ. ... အယ်လ်ဘာတာ Ferretti | မီလန်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်တိုက်ရိုက် Stream 5:00 ညနေ · အယ်လ်ဘာတာ Ferretti မီလန်ဖက်ရှင် ... ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်မီလန်များအတွက်စတငျရ, နွေဦး, နှင့် Fall, ဖေဖေါ်ဝါရီလ, စက်တင်ဘာလ. ဒီနည်းကိုအပတ်၌ဤ EVENT သည်ဖြစ်အံ့ဆဲဆဲဖက်ရှင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Are, တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်. လွှအမျိုးသမီးက S / S ကိုအသကျရှငျ 2018 ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲ, ပြက္ခဒိန်, Real-time ဓာတ်ပုံနှင့်ရူပ, လူမှုရေးစီးနှင့်သတင်း. Jungsis မီလန်ဖက်ရှင်မယ် ဆက်ဖတ်ရန် [...]
100+ အကောင်းဆုံးစုစည်းမှုဖြစ်အံ့ဆဲဆဲဗြိတိန်, အမေရိကန်အမျိုးသမီးများဝတ်စားဆင်ယင်ပုံစံ
mujeer သြဂုတ်လ 31, 20170မှတ်ချက်များ
100+ အကောင်းဆုံးစုစည်းမှုဖြစ်အံ့ဆဲဆဲအမျိုးသမီးများနေ့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနေ့လယ်စာခဲ့, အမေရိကန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ဧဝံဂေလိအဆိုပါ Looking ထူးချွန်, US မှာလာမည့်မှတစ်ဦးကအသေးဆုံးရိုးရှင်းသောစုဆောင်းခြင်းပေမယ်လှပသောစတိုင်များ, အသစ်တစ်ခုကိုစတိုင်ယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ဗြိတိန်လူမျိုးများ, ထိုသငျသညျအရပျသငျ့ရွေးချယ်ရာတွင်ရှေ့တော်၌ထိုစျေးနှုန်းကိုလည်းပေးဆောင်ကြလိမ့်မည်မထိန်းချုပ်ဘူး. ဘာကြောင့်လဲစတိုင်ထူးချွန်ရှာနေ??? ကျွန်တော်တို့ကိုပေးစေခြင်းငှါဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အခြေအနေများ. 2017 လာမည့်သစ်ကိုပုံစံယူဖို့ကြိုးစားပါ??? ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးဖို့ဘယ်သူမှ??? ဘယ်သူ့ကိုမှချင်ပါ့ ဆက်ဖတ်ရန် [...]
30+ အဆိုပါအထူးမနက်စောစောအမျိုးသမီးစားဆင်ယင်စုစည်းမှုအတွက် 2017
mujeer သြဂုတ်လ 29, 2017 1 မှတ်ချက်
ဘယျအရာ'S စုဆောင်းမှုအသစ်ကို??? အဆိုပါမိန်းကလေးများမနက်စောစောအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြ. မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများကိုအမြဲဤအစဉ်အမြဲအခြားသူများထက်တင့်တယ်ကွညျ့ရှုကြောင်းပြသချင်. ဒါကြောင့်သူတို့ကသစ်ကိုဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အသစ်သောဖိနပ်ကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသစ်တစ်ခုကိုပေးပြီ 2017 ဆင်မြန်း pics. ငါသည်ဤဆောင်းပါးအပေါ်ဆင်မြန်းဒီဇိုင်းများအများကြီးစုဆောင်းနေပါတယ်. ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုက်ညီသောအဆင်းလှသောစားဆင်ယင်မှုအတွက်အဖြစ်သူမ၏မနက်စောစောစားဆင်ယင်ကိုရွေးချယ်ပါရန်ဤဆောင်းပါးအတွက်အကူအညီတွေအများကြီးယူပြီးနေကြတယ်. ဒီဆောင်းပါးထဲမှာဒါလှပသောဆင်မြန်းင်. ငါသည်သင်တို့ကိုဤအကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် [...]